प्रथम नगर फुटबलमा वडा नं.१ सेमी फाईनदमा - Enepalese.com
प्रथम नगर फुटबलमा वडा नं.१ सेमी फाईनदमा
इनेप्लिज २०७२ माघ ८ गते १४:२७ मा प्रकाशित
पथरी, ८ माघ ।
मोरङको पथरीशनिचरे नगरपालिका–२ स्थीत बुद्ध युथ क्लबद्वारा आयोजित प्रथम नगर स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताको नौऔ खेल वडा नं. १ र ७ बीच खेल भए हो । निकै प्रतिस्पर्धा खेलमा वाड नं. १ ले खेल अवधिभर निकै उत्तकृष्ट खेल प्रदशन गरेको थियो । वाड नं.१ ले खेलको २२ र २४ औं मिनेटमा जर्सी नम्बर ४ का देबराज गुरुङले २ गोल गदै अग्रता लिएको थियो । खेलको ५४ औ मिनेटमा साइमन लिम्बुले १ गोल गरी टिमलाई जित दिएका हुन् ।
खेलको म्यान अफ द म्याच वाड नं. १ का ईस्टाइकर मिन धिमाल घोषित भए । वडा नं. ७ का खड्ग चेम्जोङले खेलको ४४ औ मिनेटमा १ सानत्वना गोल गरे । वाड स्तरीय फुटबल प्रतियोगितामा नगरका १५ वडाको टिमहरु सहभागि छन् ।
प्रतियोगिताको विजेतालाई १५ हजार रुपैया र उपविजेतालाई ८ हजार रुपैया साथमा ट्रफी, मेडल प्रदान गरिने छ । फाईनल खेलको अघिलो दिन पत्रकार र निर्माण व्यावसायीक संघ बिच मैत्रिपुण खेल हुने छ । भोली बिहीबारको खेल वडा नं. ३ र ८ बीच हुने आयोजकका सदस्य सोनु थापाले बतायनु भयो ।